ओलीले फेरी एमाले दल दर्ता गरेको भन्दै सत्तारुढ नेकपाभित्र खैलाबैला, २१ पदाधिकारीमा को-को छन्? — Imandarmedia.com
ओलीले फेरी एमाले दल दर्ता गरेको भन्दै सत्तारुढ नेकपाभित्र खैलाबैला, २१ पदाधिकारीमा को-को छन्?
काठमाडौं । नेकपा एमाले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा खैलाबैला मच्चिएको छ। बामदेव गौतमसहित कतिपय नेताले नेकपाकै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा एमाले दर्ता गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन् ।